Soo -saaraha iyo Alaab -qeybiyeha Gawaarida C C ee Jumlada ah. BWOO
Xafiiska BWOO & Bandhigga Warshadda
Taleefan Dhegaha leh
Dhegaha Bluetooth -ka Wireless -ka
• Taageer PD 18W lacag degdeg ah
• caaryada gaarka ah ee BWOO oo leh naqshad gaar ah
• Isticmaalka walxaha dabka ka caaggan
• Waxaa loo isticmaali karaa laba aaladood oo moobilka ah isku mar
• Iyada oo leh iftiin tilmaame ku -dallac ah
BWOO USB C Car Charger for Mobile Phone
BO-CC58 waa caaryadeenna gaarka loo leeyahay oo leh nooca C iyo dekedda USB, taageer PD 18W lacag degdeg ah, caddeyn wanaagsan oo suuqa laga helay, dekedda USB waxay taageertaa 2.4A wax soo saarka max, waxaan ku dallaci karnaa laba aaladda mobilada baabuurka iyadoo la adeegsanayo CC58 PD Car Charger, had iyo jeer telefoonka gacanta ku hay caaryada ku amraya badbaadsan.
12V USB C Gawaarida Gawaarida Gawaarida
PD USB C Car Charger
ABS+PC Dab -damis
Ilaalinta oo dhan waxay xaqiijinaysaa ammaan
Sawirada Degdegga ah ee USB C Baabuurka
BO-CC58 USB C charger-ka baabuurka ayaa leh cabbir aad u yar, la qaadan karo oo miisaankiisu yar yahay iyada oo aan la qaadin meel bannaan, iyadoo la adeegsanayo walxaha dab-damiska PC si loo hubiyo muddada.
Ilaalinta badan ee chip smart, ilaalinta wareega oo dhan had iyo jeer ku hay aaladahayaga mobilada caaryada lacag-bixinta aaminka ah, nooca USB-ga c xeediyaha baabuurka waa lamaanaha ugu fiican safarka nolosha.
Baabuurka degdega ah ee 30W soosaarka ugu sarreeya ee leh USB 2.0 iyo dekedda Nooca C, iftiinka tilmaame ee lagu dallaco.
Sanduuq hadiyad oo xoog leh oo leh daaqad
Waa maxay faa'iidooyinka ay ku kaydsadaan baabuurta?
1. Haddii aadan sigaar cabbin, xeedhaha baabuurku wuxuu si buuxda u isticmaali karaa is -dhexgalka sigaarka ee bilaa camalka ah si uu awood ugu yeesho inuu ku dallaco taleefankaaga gacanta ama alaabooyinka kale ee dhijitaalka ah!
2 .Haddii aad sigaar cabto, xeedho -hayaha baabuurku wuxuu qabsan karaa isku -xirka khafiifka sigaarka waqti kasta, si aad u yareysid sigaarka oo aad u ilaaliso tayada hawada ee gaariga!
3. Marka la barbardhigo qalabka korontada ee weyn oo aan xasilloonayn, xeedhaha baabuurku baaxaddiisu yar tahay, ma laha meel bannaan oo baabuurka dhexdiisa ah, wuxuu leeyahay mabda 'shaqo oo sahlan, waana mid la awoodi karo.
4. Baabuurta ku qalabeysan interface USB -ga ee baabuurka asalka ah, interface -ka USB -ga ee baabuurta intooda badan waxaa si dhab ah loogu qaabeeyey si waafaqsan heerarka gudbinta xogta mana laha shaqada korontada; xittaa haddii qaar ka mid ah iskuxirayaasha USB-ga ee baabuurka ay leeyihiin shaqada korontada, waa halbeeg keliya 500mA hadda waa mid aan ku qanacsanayn ku dallacsiinta iPhone ama aaladaha kale ee dhijitaalka ah ee shaashadda waaweyn leh. Xitaa haddii laga qaadi karo lacag, waxay qaadan doontaa waqti dheer in lacag laga qaado. Waxay la mid tahay sida loo isticmaalo xeedho iPhone si loogu dallaco iPad. Si buuxda looguma soo dallaci karo hal maalin. Lacag -qaadista noocan ahi hubaal kuma filna waqtigaan gaaban marka loo socdo iyo marka laga soo noqonayo shaqada.
5. Tusaale u soo qaado iPhone4S oo leh awood batari oo ah 1430mAh. Waxay kaliya qaadataa qiyaastii 1.5 saacadood in lagu dallaco 1A hadda. Xitaa haddii waqtiga ku -dallabka ah lagu daro marxaladda dambe, waa 2 saacadood oo keliya. Waxay ku soo kaban kartaa 40-50 iyadoo la isticmaalayo xeedho baabuur nus saac waddada. Qiyaastii% korontada ayaa ku filan si ay ula qabsadaan isticmaalka habeenkii. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad dib u cusboonaysiiso Taleefannadaada kala duwan markaad ka soo baxdo shaqada, xeedho baabuur leh interface fudud oo sigaar ah oo bixin kara 1A ama ka badan ayaa ah doorashadaada ugu fiican!
Hore: Dual Charger Car Port
Xiga: Taleefanka dhegaha ee 41-ku xiran ee iphone
Baabuurka Baabuurka ee Android
Kaydiyaha Taleefoonka Baabuurka
Telefoonka Gacanta ee Baabuurka
Dual Usb Car Car Charger
Gawaarida Gawaarida Degdegga ah
Iphone Charger Car
Kaydiyaha Baabuurka Magnetka
Kaydiyaha Baabuurka Wireless Magnetic
Gawaarida Gawaarida Badan
Kaydiyaha Baabuurka ee Dekedda Badan
Kaydiyaha Baabuurka La Qaadan Karo
Nooca C Baabuurka
Usb C Fast Charger Car
Baabuurka Usb Car
Baabuurka Wireless -ka
Haystaha Taleefoonka Baabuurka ee Wireless -ka
QAYBAHA SOO SAARKA
Xooga saar sidii aad u bixin lahayd xalalka mong pu 5 sano.
fiilo baabuur badan oo USB ah
Baabuurka Labaad ee USB
xeedho telefoonka wireless ee baabuurka
Dual Charger Car Port
Cinwaanka: Qolka. 809, Leheng Plaza, Xijiu Street, HuanZhou 3rd Road, Degmada Baiyun, Magaalada Guangzhou, Gobolka GuangDong, Shiinaha.
Telefoonka gacanta: +86-19924774505